Mampiasa Handrail Glass Railing Handrail manjelanjelatra sy maoderina handrafetana ny fomba fijerinao am-pahamendrehana, namboarina tamin'ny fitaovana avo lenta ihany, ny lalantsara hazo sy metaly anay dia manolotra tsipika madio sy fanelingelenana kely. Ny fononteny, ny tonon-taolana ary ny fitaovana fametahana dia noforonina tsara mba hitazomana ny hatsaran-tarehy manodidina anao fa tsy ny fitaovana.
Rehefa misokatra eo alohanao ny fomba fijery dia matokia fa ianao sy ireo vahininao dia tohanan'ny tanan-tànana mihaja izay haharitra amin'ny fitsapana ny fotoana.
Ny fantsom-baravarankely Standoff dia rafitra iray ahazoana antoka ny takelaka fitaratra miaraka amina fiorenanana (varingarina vy boribory / toradroa). Ny lavaka dia misy lavaka mialoha, ary atsofoka amin'ny toerany, ary ny fijanonana miaro ny tontonana mankany amin'ny endrik'ilay tohatra sy rihana. Ity dia mety ho rafitra lalamby tsy misy rafitra miaraka amina fitaovana kely hita maso kely.